कहिल्यै काठमाडौँ नफर्कने वाचा गर्दै रोल्पा फर्किइन् दिलकुमारी, आधा मूल्यमा बेचे कोठाको सामान … – Nep Stok
कहिल्यै काठमाडौँ नफर्कने वाचा गर्दै रोल्पा फर्किइन् दिलकुमारी, आधा मूल्यमा बेचे कोठाको सामान …
मंग्सिर २९, २०७८ बुधबार 313
४ महिनाअघि उनी श्रीमान् दीपक पुनसँग काठमाडौंँमा काम खोज्न आएकी थिइन् । नुवाकोटको बट्टारमा रहेको एक इँटा उद्योगमा ईटा बनाउँने र बोक्ने काम गरेका उनीहरुको काम लकडाउनले रोकिदियो । सरकारले फेरि लकडाउन गर्दैछ भन्ने सुनेका उनीहरुले हिजो साँझ नै पोका पन्तुरा कसे र बिहानै बट्टारबाट काठमाडौँ हिँडे ।दिउँसो १ बजे गोङ्गबु बसपार्कको सडक पेटीको छहारीको भुइँमा पोका पन्तुरा र दुई जना काखे छोराछोरी कुरेर बसेकी थिइन् दिलकुमारी ।
उनका श्रीमान् दीपक भने रोल्पा जाने बसको खोजीमा निस्किएका थिए । सामानहरुको पाकोमाथि निदाइरहकी थिइन् उनको छिमेकी बहिनी । ४ वर्षका छोरा दिपेश र २ वर्षकी छोरी मनिषा त्यहीँ खेलिरहेका थिए ।गाउँमा काम सकिएर हिउँद लागेपछि ४ महिनाअघि कामको खोजीमा उनको परिवार काठमाडौं आएको थियो ।
गाउँको नाइकेको साहयतामा नुवाकोटको एक इँटा भट्टामा काम गर्न पुगेका उनीहरुले फेरि अघिल्लो वर्षको जस्तै लकडाउन हुने खबर थाहा पाएपछि घर जाने यात्रामा निस्किएका थिए ।बुधबार दिउँसो बेस्सरी घाम चर्केको थियो । घामभन्दा पनि अझ चर्को थियो काठमाडौं छोड्न चाहनेहरुको हतारो । चर्को घामबाट जोगिन गोगंवुस्थित नयाँ बसपार्कको सानो छहारी छेउ पोका पन्तुराहरुको बीचमा थिइन् रोल्पाकी दिलकुमारी पुन मगर ।
उनीहरुले खाना पकाउने ग्याँस, खन्ने साबेलदेखि भाँडाकुडाको पोको पन्तुरो कसेका थिए । उनका श्रीमान् दीपक अघिल्ला वर्षका हिउँदमा पनि इँटा बनाउने काम गर्न काठमाडौंँ आएपनि दिलकुमारी भने पहिलो पटक आएकी थिइन् । उनले अब फेरि फर्केर काठमाडौं नआउने बताइन् । टिकट खोज्न उनका श्रीमान् कता गए उनलाई थाहा थिएन ।
उनी घर जाने बस र श्रीमानको बाटो हेर्दै सामान कुरेर बसिरहेकी थिइन् ।इँटा भट्टामा काम गरेको पनि पूरा पैसा नलिइ हिँडेको उनले बताइन् । ‘साहुले गाडि भाडा मात्र दिएको छ दश–पन्ध्र हजार जति । अरु पैसा दिएको छैन ।’ इँटा भट्टामा काम गाउँका अरु मान्छे नफर्किएपनि बालबच्चा भएका कारण घर जान लागेको उनले सुनाइन् ।
अब फेरि काठमाडाै‌ं नआउने, रोल्पामा मकै छर्ने, खेत रोप्ने काम गर्ने उनले सुनाइन् ।उनीसँग कुरा गर्दा गर्दैगर्दा उनका श्रीमान् दीपक पनि आइपुगे । उनी घर जाने बस खोज्न फोनमा व्यस्त थिए । फोनमा कुरा गर्दा गर्दै एउटा बस मिलेपछि उनी प्रशन्न देखिए । उनले भने–‘लकडाउनमा यता बस्दा धेरै समस्यापनि हुने भयो । पोहोर साल पनि त्यस्तै दुःख भयो । यसपाली चाँहि चाँडै नै जाउँ भनेर हिँडियो । अहिले बस पनि मिलाइयो ।’
५ महिनादेखि उनका श्रीमान्–श्रीमतीले इटा पार्ने तथा बोक्ने काम गरेबापतको २ लाख हाराहारी ज्याला लिनुपर्ने छ । लकडाउनका कारण नाइकेलाई सो रकम लिएर दिन भन्दै घर फर्केको दीपकले सुनाए ।उनका अनुसार १ लाख, डेढ लाख, दुई देखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म काम गरेर पाउनुपर्ने ज्याला नाइकेको विश्वासमा छोडेर कामदारहरु घर फर्किरहेका छन् ।उनले भने–‘काममा लगाउने हाम्रो गाउँतिरको नाइके छन् ।
उनीमार्फत् त्यो पैसा हामी लिन्छौँ । अहिले उनै नाइकेको विश्वासमा पैसा छोडेर जाँदैछौँ ।’उनको रोल्पास्थित गाउँको खास नाम राङकोट हो । स्थानीय तह निर्माण गर्दा गाउँको नाम फेरेर परिवर्तन गाउँपालिका बनाइएको रहेछ । उनले गाउँको नाम परिवर्तन गरेर परिवर्तन राखेपनि आफ्नो दुःख भने परिवर्तन नभएको बताए । दीपकले हाँस्दै भने, ‘परिवर्तन नाममात्रै छ हामी यस्तो गरेर हिँड्नुपरेको छ । झोला बोक्यो बोरा बोक्यो यस्तै छ । अब घर जान ढिला हुन्छ, टाढाको बाटो छ, बालबच्चा लिएर हिँड्नुपरेको छ ।’
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर २९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextकतार हुने र कतार जानेलाई खुसीको खबर, कतार सरकारले दियो यस्तो सुबिधा
अन्ततः पलका बिषयमा पूजाले पनि कुरा फेरिन
बला त्कार हो भने नाबालिकाले किन प्रतिकार गरेन? त्यही बेला किन भनेन ? : ब्युटीसियन सुस्मा महरा
आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा दुबई आएका ११८ नेपाली युवा अलपत्र
आईतबार सार्वजनिक बिदा ! (5145)
एउटी आमाको यो कारुणिक दृश्य : मृत्यु भएकी छोरीलाई काखमा राखेर … (4410)
पल हिरासतमा हुँदा जब पिडित गायिकाले फेसबुकमा लेखेको त्यो शब्द पढ्न पुगिन्…. (4268)
मोरङमा डेढ वर्षको बच्चा ‘चोरेर’ ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या (4201)
अब देशभरी पेट्रोल देशभरी नपाइने?भर्खरै आयो यस्तो खबर। (3907)
पेट्रोलको मूल्य फेरी सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै बढ्यो : हेर्नुहोस (3525)
समिक्षा अधिकारीको पनि अडियो बाहिरियो, त्यो दिन यस्तोसम्म भएको रहेछ : हेर्नुहोस भिडियो सहित (2790)